ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ မြန်မာ U-20 တက်ရောက်သွားခြင်း..။ | ရွှေမင်းသား
Home » ဘောလုံး ရပ်ဝန်း » ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ မြန်မာ U-20 တက်ရောက်သွားခြင်း..။
ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ မြန်မာ U-20 တက်ရောက်သွားခြင်း..။
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Saturday, August 04, 2007
ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ မြန်မာ U-20 တက်ရောက်သွားခြင်း.....လို့ကျနော်ရေးရခြင်းကြောင်းကတော့ ဗီယက်နမ်မှာ လက်ရှိကျင်းပနေ သော အာဆီယံ ယူ (၂၀)ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ မှာ ကျနော် တို့မြန်မာ U-20 အသင်း ဟာ အဖွင့်ပွဲစဉ် မှာ လာအိုအ
သင်းကို ၄ ဂိုး၊ ဂိုးမရှိ နဲ့နိုင်သွားပါတယ်။မလေးရှားနဲ့ပွဲမှာ လည်း ပြည့်ဖြိုးဦး ရဲ့ Free kick အပါအဝင် ၂ဂိုး၊၁ဂိုး နဲ့ အနိုင်ရ သွားပါတယ်။ဒါကြောင့် မြန်မာ U-20 အသင်းဟာ နှစ်ပွဲကန် နှစ်ပွဲနိုင် ရမှတ် ၆ မှတ်နဲ့ဆီမီးတက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စု(က) >> မြန်မာ ၊ စက်ပူ ၊ မလေးရှား ၊ လာအို ။
အုပ်စု(ခ) >> ထိုင်း ၊ ဗီယက်နမ် ၊ ကမ္ဘောဒီးယား ၊ ဘရူနိုင်း ။
မြန်မာ - လာအို ( ၄ - ၀ )
မလေးရှား - စင်္ကပူ ( ၃ - ၀ )
ထိုင်း - ဗီယက်နမ် ( ၁ - ၁ )
ဘရူနိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား ( ၂ - ၁ )
ဗီယက်နမ် - ကမ္ဘောဒီးယား ( ၅ - ၀ )
ထိုင်း - ဘရူနိုင်း ( ၇ - ၀ )
မြန်မာ - မလေးရှား ( ၂ - ၁ )
လာအို - စင်္ကပူ ( ၂ - ၁ )
ဗီယက်နမ် - ဘရူနိုင်း ( ၆ - ၀)
ထိုင်း - ကမ္ဘောဒီးယား ( ၇ - ၀ )
မြန်မာ - စင်္ကပူ ( ? - ? )
မလေးရှား - လာအို ( ? - ? )
ထိုင်း လည်းပဲ ဆီမီး ကို မြန်မာ နဲ့အတူ အုပ်စုဗိုလ် အဖြစ်နဲ့တက်သွားပါပြီ။